गोधुली रनिङ कपमा धरान ८, १५, ११ र १९ नं. वडा विजयी – दिव्य रोशनी अनलाईन
दिव्य रोशनी(धरान)/ धरानमा जारी २२ औं संस्करणको गोधुली फुटबल रनिङ कपमा आज बुधवार भएको खेलमा धरान ८, १५, ११ र १९ नं. वडाले विजय हात पारेको छ ।
धरान रंगशालामा भएको पहिलो खेलमा धरान ८ नं. वडाले ९ नं. वडालाई ३–० गोल अन्तरले पराजित गर्दै विजय हात पारेको हो। खेलमा धरान–८ का लागि आमोद माझीले २ गरेका थिएभने एक गोल सविन राना मगरले गरेका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच ८ नं. वडाका मदन लाबुङ घोषित भए । उनले नगद १५ सय हात पारे।
यसैगरी दोस्रो खेलमा धरान १५ ले धरान १० नं वडालाई २–० गोल अन्तरले हराउदै जित हात पारेको छ। खेलमा धरान १५ नं वडाका सुवास मगर र सुगम जिमीले एक÷एक गोल गरेका थिए। खेलको म्यानअफ दि म्याच १५ नं वडाका सुगम जिमी घोषित भए। उनले नगद १५ सय हात पारे।
यस्तै तेस्रो खेलमा धरान ११ नं वडाले १७ नं वडालाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। खेलमा धरान ११ का रिवस मास्के र दावा शेर्पाले गोल गरेका थिएभने धरान १७का तर्फबाट नगेन्द्र विकले एक गोल गरेका थिए। खेलको म्यान अफ दि म्याच धरान ११ का गोलकिपर प्रदिप जिमी घोषित भए। उनले नगद १५ सय हात पारे।
यसैगरी आज भएको अन्तिम खेलमा धरान १९ ले धरान २० लाई ४–०को फराकिलो गोलअन्तरले पराजित गरेको छ। खेलमा धरान १९ का ईन्चन राईले २ गोल गरेभने आयाम राई र विनोद राईले एक÷एक गोल गरेका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच धरान १९ नं. वडाका विनोद रार्ई घोषित भए । उनले पनि नगद १५ सय हात पारे ।
भोली विहिवारको पहिलो खेल धरान वडा नं. १६ र ७ का बीच हुने छभने दोस्रो खेल धरान ६ र ३ नं वडाका बिच हुने आयोजकले जनाएको छ।
← बुधबार ३०७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
दुबईमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाईएका सुजन लिम्बुको परिवारद्धारा जिवन रक्षाको आग्रह →
४ दिन अगाडि ४ दिन अगाडि दिव्य रोशनी अनलाईन
कोरोना संक्रमणबाट धरानका उद्योगपति रोशन सोनीको निधन